Real Madrid oo warbixin caafimaad ka soo saartay dhaawacyada Hazard iyo Marcelo, kahor kulanka El Clasico – Gool FM
(Madrid) 05 Dis 2019. Kooxda Real Madrid ayaa waxay maanta si rasmi ah shaaca kaga qaaday website-keeda natiijooyinka baaritaanadii caafimaad uu maray ciyaaryahankeeda Eden Hazard.
Xiddiga garabka ka ciyaara ee reer Belgian ayaa ku dhaawacmay kulankii ay kooxda Paris Saint-Germain ku wada ciyaareen tartanka Champions League, kaasoo ka tirsanaa kulamada shanaad ee wareega group-yada.
Baaritaanadii caafimaad uu maray Eden Hazard ayaa waxay muujiyeen in uu dhaawac ka soo gaaray lugtiisa midig.
Hddaba kooxda Real Madrid ayaa warbixin cusub ay daabacday waxay kaga hadashay heerka uu gaarsiisan yahay dhaawaca Eden Hazard, laakiin warkan cusub ayaan lagu xaqiijinin mudada uu ka sii maqnaanayo garoomada, iyadoo sidoo kale ay jiraan warar muujinayaa inuusan awoodi doonin inuu dib ugu soo laabto garoomada kahor mudo bil iyo bar ah.
Warkan rasmiga ah ee ka soo baxay kooxda Real Madrid ayaa waxaa lagu sheegay:
“Kaddib baaritaannadii caafimaad ay ku sameeyeen waaxda caafimaadka ee Real Madrid xiddigeena Eden Hazard, waxay muujiyeen in jug ay ka soo gaartay lugtiisa midig, soo kabashadiisana waa la sugayaa in la qiimeeyo”.
Wargeysyada gudaha dalka Spain ayaa waxay muujiyeen inuu Hazard garoomada ka maqnaan doono afar ilaa lix isbuuc, sidaas darteed kama qeyb qaadan doono kulanka El Clasico ee ay la ciyaarayaan Barcelona 18-ka bishan December.
Dhinaca kale Real Madrid waxay bayaan ka soo saartay xaalada dhaawac ee ciyaaryahankeeda Marcelo, waxaana Los Blancos ay sheegtay in baaritaanadii caafimaad ee lagu sameeyay xiddiga reer Brazil lagu ogaaday inuu dhaawac ka qabo muruqa lugtiisa bidix.
Inkastoo kooxda ka dhisan caasimada Madrid ee dalka Spain aysan xaqiijinin mudada ay garoomada ka maqnaan doonaan xiddigaheeda Marcelo iyo Eden Hazard, haddana waxay sheegtay in la qiimeyn doono xaaladooda.
"Waa wax laga xishoodo inaan aragno Mane oo ku dhammaystay kaalinta afaraad ee Ballon d'Or" – Lionel Messi